Deegaanka Tiatay oo iskuul cusub laga dhisay markii ugu horeysay . – iftiin fm
Deegaanka Tiatay oo iskuul cusub laga dhisay markii ugu horeysay .
Wararka na soo garaya deegaan barlamaaneedka Tiaty ayaa waxay sheegayaan in iskuul cusub oo loogu magac daray plesian laga dhisay degmada Amaya kaasi oo kaalin weyn ka qaadanaya dib uu soo celinta nabadda ee deegaankaasi.
Iskuulkani cusub ayaa la sheegay in uu yahay mid boarding ah oo ay wada dhigan doonan ardeyda ka kala soo jeedaan qowmiyadaha diriirtu ay ka dhaxeyso ee xadka kala qeybiyo ismaamulada kala ah Samburu ,Baringo iyo Laikipia .
Xildhibaanka laga soo doortay deegaan barlamaneedka Tiaty William Kamket oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in iskuulkani cusub lagu dhisay lacag dhan 43 milyaan oo shilin kaasi oo kaalin weyn ka qaadanaya xoojinta nabadda deegaankaasi .
Dhanka kale xoghayaha maamulka wasaaradda dowladda wadaajinta ee dalka Abdul Bahari ayaa sheegay in dowladda ay ka go’aan tahay in ay mashaaric horumarineed ay halkaasi ka fuliso.
← Dhaqaatiirta iyo Shaqaalaha Caafimaadka oo kuu baaqayaan in xilka laga qaado ku xigeenka guddomiyaha jaamacadda Nairobi Prof. Stephen Kiama.
Dad ku dhintay weerar ka dhacay dalka Tanzania . →